Mgbasa Ozi na Psychozụ ahịa Psychology Infographic
Sneaky Psychology nke Mgbasa Ozi
Sunday, July 17, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Nke a bụ ezigbo infographic si BuySellAds, akpọ Sneaky Psychology nke Mgbasa Ozi. Offọdụ n'ime ndị a abụghị naanị mgbasa ozi, ọ bụkwa atụmatụ ahịa ahịa zuru oke. M na-ele anya na Advertising dị ka ihe omume… ma ọ bụ nko.. mana Ahịa bụ atụmatụ na atụmatụ niile na-eduga na mmepe Mgbasa Ozi.
A na-ekpughere onye ọ bụla n'ime anyị ihe ngosi 3,000 ruo 10,000 kwa ụbọchị site na mkpọsa ngwá ahịa TV, bọọdụ mkpọda n'èzí, ọkọlọtọ webụsaịtị, na ọbụna T-shirts ndị agbata obi ma ọ bụ iko ndị ọrụ ibe anyị. Ebe ọ bụ na mgbasa ozi juputara anyị, ndị na-ere ahịa na-ewepụta nyocha ọhụụ nke uche ma jiri ụdị aghụghọ dị iche iche iji dọta uche anyị ma nweta obi ike ndị ahịa anyị.
I chere na nke a bụ sneaky? Ma ọ bụ ka ọ na-egwuri egwu n'ihe niile anyị chọrọ? Anyị chọrọ ịbụ ihe okike… ọ bụrụ na ịzụta Apple na-enyere anyị aka ikwenye na anyị bụ, ọ dị njọ? Na, na Apple mma styling nke ha ngwaike - ga-ha a na-azụkarị Apple ọzọ, Ko? Ya mere… na retrospect… ndị Apple ọrụ ndị ọzọ okike? Echere m na ha nwere ike ịbụ!
Vidiyo: Mpempe akwụkwọ na ebe ọdịda na Formstack
Enwere M Social Media Guilt
Jul 17, 2011 na 11:27 PM
Echere m na Apple nwere ahịa teknụzụ kacha mma n'ụwa. Ngwaahịa ha abụghị nke kachasị mma na edemede niile mana akara Apple abanyela n'ime nde mmadụ ma lee m anya na teknụzụ kachasị mma n'ụwa n'oge a.
Mbido gam akporo (site na HTC na clones) na-amalite inwe mmetụta yiri ya na ekwentị ekwentị OS na Samsung / Sony nwere ụdị akara amamịghe mana ọ pụtaghị dị ka ihe ịga nke ọma na ahịa US mana ọ siri ike na Asia.
Ọtụtụ nde ụmụ nwoke Apple na-egosi na ikuku mgbasa ozi Social Media jupụtara na ndị mmadụ na-akwado akara ahụ na mgbe ọ bụla Apple nwere mmebi ngwaahịa, ha na-agbaba ngwa ngwa na nchekwa Apple ruo mgbe Apple doziri nsogbu ahụ (Eg nsogbu antenna n'oge na iphone4)
Jul 22, 2011 na 4:58 PM
Otutu ndi mmadu adighi ka ha amaghi udiri ihe omuma na ihe omuma ha na emetuta agwa ha. Ọ dabara na ọ naghị arụ ọrụ na mmadụ niile. Anyị kwesịrị ịghọta ihe na-akpali ndị ahịa nwere ike ịbara ndị ahịa anyị uru; Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ ewerela nke a site na iji mgbasa ozi mara mma nke mmekọahụ.
Otu osi hie na anyi amaghi otu anyi siri hu site na otutu ulo oru na egosi anyi dika chinchi ma obu 'ihe ndi ozo'. Enwere ahia ụgbọ ala dị elu na-aga na Hulu ugbu a na-egosi ụdị mmadụ niile nọdụrụ n'okporo ụzọ na-ese ya na obere brushes ma ọ bụ na-ekpofu ọkụ ma ọ bụ na-arịgo n'okporo ámá n'okporo ámá iji gbanye nnụnụ akpụkpọ ụkwụ. Ihe abuo ndia gosiputara ihe ulo oru ndi a chere banyere anyi: chinchi ma obu ndi ohu.
Obi dị m ụtọ na infographic a kwuru aha logos. Ana m agba ndị mmadụ ume ka ha attentionaa ntị na akara ngosi nke logos, na mkpọsa azụmahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi. YouTube bụ ebe magburu onwe ya ịchọta vidiyo na-eme ka anyị niile mara ihe akara ngosi pụtara. Gbalịa chọọ maka akara ngosi akara.